कसरी सिक्ने जाभा प्रोग्रामिङ ?- भाग १ - IAUA
ramkrishna October 19, 2017	कसरी सिक्ने जाभा प्रोग्रामिङ ?- भाग १
सन् १९७० ( १९८० को दशकमा कम्प्युटरमा गरिने प्रोग्राम केवल सी(C) अथवा सी ++ -C++) बाट मात्रै गरिन्थ्यो र जुनसुकै कम्प्युटर सप्mटवेयर यहि दुइ प्रोग्राम बाट मात्रै सम्भब थियो । अझ १९७० तिरको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त सी (C) प्रोग्राम्मिङबाट मात्रै कम्प्युटरमा प्रोग्राम गरिन्थ्यो। अच्चम लाग्न सक्छ कसरी गरिन्थ्यो होला मात्र सी बाट सम्पूर्ण प्रोग्राम्मिङ ? तर बास्तवमा सी नै कम्प्युटर को मेरुदण्ड थियो तत्कालिन युग।
सी बाट मात्रै प्रोग्राम गर्दा धेरै कठिनाई र कम्प्युटरको काम अलि सिमित जस्तै बन्यो र अर्को प्रोग्रामिङ गर्ने प्रणाली को जन्म भयो र त्यो थ्यियो सी ++ । सी ++ ले सी प्रोग्रामिङले गर्न नसकेका कामहरुलाई सजिलै गर्न सक्छ र यसमा सीमित भएका गुण लगायत अन्य अरु गुणहरु पनि समाबेस छन्। यसको मतलब अब कम्प्युटरको प्रोग्राम्मिङ अझ सजिलो र सुमधुर हुन थाल्यो । कम्प्युटरमा चल्ने प्रोग्राम र अन्य सप्mटवेयरको गति सीको भन्दा तिब्र हुन थाल्यो, यो अर्थमा कि सीले कम्पाइल गर्ने तरिका र सींं ले कम्पाइल गर्ने तरिकामा केहि फरक हुन्छ ।
हामीले कुनै पनि कम्प्युटरमा गर्ने काम उसले त्यो काम सुरु हुनु अगाडीनै जाच गर्दछ र त्यो कामको सुरुवात हुने समयमा त्यसमा कुनै गल्ति छ कि छैन भनेर उसले जांच गर्छ र यदि केहि गल्ति नभएमा त्यो कामलाई सुरु गरिदिन्छ। यहि प्रक्रियालाई नै हामी कम्पाइल भन्दछौ ।
कुनै पनि कम्प्युटर प्रोग्रामको केहि न केहि कमजोरी अथवा त्यो कुनै न कुनै तरिकाले सिमित अवश्य हुन्छ । नयाँ नयाँ प्रबिधिको विकास पनि त्यहि कमजोरीले हुने गर्दछ। सी र सी ++ मा पनि केहि कमजोरी थियो । सी र सी ++को कमजोरी भनेको यो कि यो जुन ओपरेटिङ सिस्टममा बनाएर उक्त प्रोग्रामलाई कम्पाइल गर्यो त्यसैमा मात्रै सुचारु गर्न सकिन्थ्यो । यदी कसैले माइक्रोसफ्टमा सी अथवा सी ++ बाट प्रोग्राम गर्यो भने त्यो केवल माइक्रोसफ्टमा मात्रै चलाउन मिल्थ्यो तर त्यहि प्रोग्रामलाई अरु ओपरेटिङ सिस्टममा (OS) चलाउन वा कम्पाइल गर्न मिल्दैन थियो।
सन् १९९० मा सन माइक्रो सिस्टमले (Sun MicroSystem) जाभाको विकास गरेको हो । १८ महिनाको अथक प्रयास पछि सन माइक्रो सिस्टमका इन्जिनियरहरुको टोलीले जाभाको सुरुवात गरे । सुरुमा यसको नाम ओअक (Oak) राखियो । पछि सन् १९९५मा मात्रै जाभामा (JAVA) नाम परिवर्तन भयो।
एउटा कपमा चियाको बाफ उडेको जस्तो देखिने सरल लोगो जाभाको छ । यो लोगो हामीले कम्प्युटर, मोबाइल लगायत ग्याजेटहरुमा देख्न सक्छौ तर यो के हो भनेर प्राय कमैले मात्रै बुझ्ने प्रयास गर्छन। जभालाई मुख्यतअ जुनसुकै ओपरटिंग सिस्टममा चलनका निमित्त र इन्टरनेटलाई मध्ये नजर गर्दै विकास गरिएको हो।
जाभाको जन्म सी++ को कोख बाट भएको हो भन्दा त्यति गलत नहोला तर सी ++ भन्दा अलि बढी उपयोगी हुन पुग्यो जाभा । सीं+ लाई सिस्टम प्रोग्राम्मिंग भत्र मिल्छ भने जभालाई इन्टरनेट प्रोग्रामिङ भत्र पनि सकिन्छ।
जुन तरिकाले सी र सी ++ मा प्रोग्राम गरि त्यसलाई कम्पाइल गरिन्छ, त्यो भन्दा अलि भित्र तरिकामा जाभाको प्रोग्रामलाई कम्पाइल गरिन्छ । कम्पाइल गरिएको उक्त प्रोग्राममा केहि गल्ति नभएको खण्डमा त्यो प्रोग्रामलाई सुचारु गरिन्छ र प्रोग्राममा भएको कोडिङ अनुसार प्रोग्रामले काम गर्दछ।
प्रोग्रामको सुरुमै क्लास(class) बनाउने काम गरिन्छ अनि सम्पूर्ण प्रोग्रामलाई त्यो क्लासको भित्र राखिन्छ।
जाभा एप्लेट भनेको एक प्रकारको जाभा प्रोग्राम हो जसको निर्माण इन्टरनेटका लागि गरिन्छ र जभालाई समर्थन गर्ने ब्राउजरले(browser) त्यो प्रोग्रामलाई सुचारु गर्दछ। यो एउटा एनिमेशन मात्रै होइन बरु यो एउटा इन्टेलिजेन्ट प्रोग्राम हो जो स्वचालित हुन्छ । प्रयोग कर्ताको निर्देशन अनुसार यो एप्लेटले काम गर्दछ।
एप्लेट संगै आउछ त्यसको सुरक्षा र त्यसको प्रयोगको सम्भावना । हामीले कुनै पनि प्रोग्राम, कुनै फायल इन्टरनेटबाट सेव गर्दा भाइरस लाग्ने सम्भावनाको जोखिम पनि हुन्छ। जाभा एप्लेटको सहायताले सेव गर्न लागिएको फायल अनि कम्प्युटर र नेटवर्क बीच फायरवाल (firewall) बन्दछ र भाइरस लाग्न बाट कम्प्युटर सुरक्षित हुन पुग्छ। भाइरस लग्न नदिनका लागि हामी जाभालाई समर्थन गर्ने ब्राउजर प्रयोग गरि जाभा एप्लेट निर्धक्क साथ डाउनलोड (download) गर्न सक्छौ। अहिले बिस्वमा धेरै ओपरटिङ सिस्टम छन् र त्यो सबै सिस्टममा सजिलै चलाउन मिल्ने प्रोग्राम बनाउनकै निम्ति जाभाको उत्पत्ती भएको हो । यसकारण जाभा एप्लेट इन्टरनेटबाट सजिलै संग जुनै ओपेरटिङ सिस्टममा पनि चलाउन मिल्छ ।
जाभाको पहुच धेरै ठुलो छ। हामीले हातमा बोक्ने मोबाइल देखि अन्तरिक्षमा प्रयोग हुने satellite सम्मको प्रोग्राम जाभा मार्फत गरिन्छ २१ औं शताब्दीको आधुनिक संसारमा। मोबाइलमा प्रयोग हुने ठुला र धेरै उपयोगी सफ्टवेयर जभामै गरिन्छ। कम्प्युटरमा चल्ने ग्राफिक र आकर्षक गेमहरु पनि जाभाको सहायताले गर्न सकिन्छ। हिजोआज हामीले देखेका (Smartphone) स्मार्टफोनहरु पनि जभामै प्रोग्राम भएर बनेका हुन्छन। जाभाको प्रोग्रामले रोबोटहरु पनि निर्माण धमाधम हुदै। धेरै साना साना (microchip) पनि जाभाबाटै प्रोग्राम भएर धेरै उपयोगी र स्वचालित हुने गर्छन। विश्व बजारमा देखिएको नयाँ अन्दाजमा टेलिभिजन(TV) हेर्ने शैली जस्तै LED TV, BLU­RAY, आदिको बिकाश पनि जाभाकै कारण सम्भव भएको हो।
जाभाको धेरै फाइदाले गर्दानै थुप्रै प्रबिधिको विकास हुदै छ र भएका छन् जसले मानवको बाँच्ने शैलीनै परिवर्तन हुदैछ। ठुला ठुला मोबाइल कम्पनीहरुले प्रयोग गर्ने धेरै सुरक्षित र भरपर्दा नेटवर्क यन्त्र (Networking Device)हरु पनि जाभा मार्फत प्रोग्राम भएको पाईएको छ। जाभामा हुने प्रोग्राम कसरी हुन्छ भनेर जात्रका लागि आगामी महिनामा पनि हाम्रो जाभा सम्बन्धि लेखहरु पढ्दै गर्नुहोला।
Previous Previous post: कम्प्युटरमा काम गर्नेले कसरी दिने आँखालाई आराम ?
Next Next post: हिमस्टारले ल्यायो नयाँ एलईडी बल्ब